आइतबारको खण्डग्रास सूर्य ग्रहण : कुन राशिलाई के फल ? -
६ असार २०७७, शनिबार ०९:५२ June 20, 2020 Kanchanpur KhabarLeaveaComment on आइतबारको खण्डग्रास सूर्य ग्रहण : कुन राशिलाई के फल ?
असार ७ गते औँसीको दिन आकाशमा खण्डग्रास सूर्य ग्रहण लाग्दैछ । सूर्य ग्रहण जहिले पनि दिनमा मात्र लाग्छ, रातको समयमा लाग्दैन । सूर्यमा लाग्ने ग्रहण सबै देश अनुसारको समय फरक हुने भए पनि नेपालमा असार ७ गते बिहान १०ः५० देखि सुरु हुने देखिन्छ । ग्रहणको मध्य समय मध्यान्ह १२ः३८ बजे हुनेछ । र ग्रहण मोक्ष अर्थात् ग्रहण दिउँसो २ः२३ हुनेछ ।
यसरी नेपालमा आइतबार लाग्ने खण्डग्रास सूर्य ग्रहण ३ घण्टा ३३ मिनेटको हुनेछ । ग्रहणको समयमा नकारात्मक विकिरणहरुको प्रवाह बढी हुने भएकाले यस समयलाई सूतक लाग्ने समयको रुपमा मान्ने शास्त्रहरुको प्रमाण छ । सूर्य ग्रहणमा ४ प्रहर ( १२ घण्टा ) र चन्द्र्रग्रहणको समयमा ३ प्रहर ( ९ घण्टा ) अगाडि नै सूतक लाग्ने गर्दछ । यसकारण ७ गते लाग्ने खण्डग्रास सूर्य ग्रहणको सूतक समय ६ गते राति १०ः५० बजेदेखि नै शुरु हुने भएकाले ६ गते राति १०ः५० देखि नै बालक, वृद्ध, बिरामी बाहेकका व्यक्तिलाई भोजन गर्न निषेध गरिएको छ ।
नेपाली आकाशमा लाग्ने यो ग्रहण २०७७ सालभरिको एक मात्र ग्रहण हो भने यो वर्ष नेपालबाट अरु कुनै पनि ग्रहण देखिने छैनन् । यो खण्डग्रास सूर्य ग्रहण नेपालबाट मात्र नभइ विश्वका अन्य देशहरुबाट पनि देख्न सकिन्छ । यस ग्रहणलाइ भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदिभ्स, भूटान, चीन, म्यान्मार, अफगानिस्तान, अफ्रिका, अष्ट्रेलिया, अमेरिकाका केही भूभाग, अन्टार्टिका साउदी अरब, कङ्गो, इथोपिया लगायत युरोप, एशिया महाद्विपका विभिन्न देशहरुबाट समेत देख्न सकिन्छ ।
ग्रहण २ प्रकारको हुन्छ । १) खण्डग्रास २) खग्रास
सूर्य वा चन्द्रमाको पुरै भाग नभइ थोरै अर्थात् आंशिक भागमा मात्र कालो धब्बा देखिने ग्रहणलाई खण्डग्रास ग्रहण भनिन्छ । र कुनै भाग मात्र नभइ सूर्य वा चन्द्रमाको पुरै भाग छायाँमा पर्नुलाई ग्रस्तोदित या खग्रास ग्रहण भनिन्छ । खण्डग्रास थोरै समय मात्र रहन्छ भने खग्रास ग्रहण धेरै समयको हुने गर्दछ । आइतबार हाम्रो देशमा लाग्ने ग्रहण पनि खण्डग्रास सूर्य ग्रहण हो । चन्द्रग्रहण पूर्णिमा तिथिमा र सूर्य ग्रहण औँसी तिथिमा लाग्दछ ।
ग्रहण सधैं चन्द्रमामा र सूर्यमा मात्र लाग्छ । ग्रहण लागेको समयमा चन्द्र र सूर्य कमजोर हुन्छन् । ज्योतिष शास्त्रमा सूर्य आत्मा र चन्द्रमा मनसँग सम्वन्ध राख्ने कुरा बर्णन गरेको पाइन्छ । तसर्थ यो समयमा आत्मविश्वास प्रदान गर्ने ग्रहहरु कमजोर हुँदा काममा बाधा पुग्छ भन्ने ज्योतिष शास्त्रको मान्यता रहेको छ ।ज्योतिष शास्त्रमा ग्रहणको समय अशुभ मानिन्छ । ग्रहणको समयमा धेरै कामहरु गर्न निषेध गरिएको छ ।
आइतबारको सूर्य ग्रहण : कुन राशिलाई कस्तो ?
मेष : श्रीप्राप्ती
​वृष : क्षति
मिथुन : घात
कर्कट : व्यय
सिंह : लाभ
कन्या : सुखम्
तुला : माननाश
वृश्चिक : कष्ट
धनु : स्त्रीपीडा
मकर : सौख्यम्
कुम्भ : चिन्ता
यसरी आइतबारको ग्रहणको फल मेष, सिंह, कन्या, र मकर राशिलाई शुभ र अन्य राशिलाई अशुभ देखिन्छ ।
त्रिनगर नाकाबाट भित्रिए ८३ हजार नेपाली
कञ्चनपुरमा सर्पले टोक्दा महिलाको मृत्यु
६ श्रावण २०७७, मंगलवार ११:५७ July 21, 2020 Kanchanpur Khabar
३० भाद्र २०७७, मंगलवार ०८:२५ September 15, 2020 Kanchanpur Khabar
बेलडाँडीमा विभिन्न पार्टी परित्याग गरि ५० जना काग्रेस प्रवेश
१३ श्रावण २०७७, मंगलवार १७:०२ July 28, 2020 Kanchanpur Khabar
कोरोनाविरुद्ध खटिनेबाहेक सबै कर्मचारीको भत्ता कटौती
१५ जेष्ठ २०७७, बिहीबार १८:५७ May 28, 2020 Kanchanpur Khabar
अस्पताल भर्ना हुन पनि मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नुपर्ने व्यवस्थाले बिरामी मर्कामा
९ भाद्र २०७७, मंगलवार ०७:५६ August 25, 2020 Kanchanpur Khabar
सेनाको सुदूरपश्चिम पृतना दिपायलबाट कैलाली सर्‍यो
३० बैशाख २०७७, मंगलवार ०७:१० May 12, 2020 Kanchanpur Khabar
३ बैशाख २०७७, बुधबार १५:५३ April 15, 2020 Kanchanpur Khabar
कोरोना परीक्षणको ‘क्रस भेरिसिफेसन’ अब नेपालगञ्ज र धरानमा पनि
७ बैशाख २०७७, आईतवार १८:२३ April 19, 2020 Kanchanpur Khabar
मेलौलीस्थित जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र चिकित्सकविहीन
४ कार्तिक २०७७, मंगलवार १३:२६ October 20, 2020 Kanchanpur Khabar